China Wholesale Vendors Custom Private Label Eyelash Extensions orinasa sy mpanamboatra | Weiti
1, fanitarana volomaso eyelash
2, hatevin'ny 0.03 / 0.05 / 0.06 / 0.07 / 0.10 / 0.12 / 0.15 / 0.18 / 0.20 / 0.25mm
4, fitaovana avo lenta sy asa-tanana azo antoka
Famintinana J / B / C / CC / D / D + / L
Azo alaina ohatra ny ohatra.
Misy ny label tsy miankina. Manaiky ny serivisy OEM & ODM izahay.
Fitaovana avo lenta sy asa-tanana azo antoka, ny volo tsy miraikitra ary tsy misy residu, mora esorina, mora ampiasaina, curl marina & halavany. 24 ora aorian'ny varotra
Ny hatevin'ny 0.05m sy ny 0.07mm no tena kapoka mafy indrindra, azonao atao ny mametaka karavasy tokana 3 ~ 10 amin'ny kapoka voajanahary iray nefa tsy manimba ny fehikibo voajanahary.
Ity karazan-kapoka ity dia tsy voatsatoka afa-tsy amin'ny 1/3 farany fanitarana, mahatonga ny vatan'ny fehin-kibo ho feno sy mampientam-po tokoa.
lt manana malefaka tsara. hery mahery vaika sy breathability. Izy io dia maivana sy malefaka kokoa.
Satria vita amin'ny mink faux izy io, maivana dia maivana ary manome loko mainty madio. Misaotra noho ny tsy namirapiratra, manome endrika voajanahary indrindra izy io.
Ny fanitarana volomaso dia manampy ny halavany, ny hateviny, ny fikorontohany ary ny fahafenoany amin'ny kapoka voajanahary, manatsara ny fiakarana sy ny endrik'ilay maso. Izy ireo dia ampiharina amin'ny fototry ny lash voajanahary tsirairay miaraka amin'ny lakaoly.
Endri-javatra lehibe: ny eyelashes mpankafy efa natao dia manampy amin'ny fanafainganana ny fizotry ny volomaso. Satria tsy mila manamboatra maso volomaso amin'ny tanana ianao. Ity mpankafy curling ity dia mampiasa fatorana adhesive, tsy misy fatotra, ary manana fotony fohy sy manify izay tsy manimba ny volomaso voajanahary.
Momba ny hateviny: Misy mpanakanto volomaso milaza fa 0,05mm sy 0,07mm manify loatra ka tsy azo ampiasaina. Na izany aza, malefaka sy voajanahary izy ireo. Tsy mafy hatoka izy ireo. Misy milaza fa manify loatra ny 0.10mm, ary misy milaza fa 0,10mm matevina nefa mafy be. Raha ny marina, ny karazana volomaso tsirairay dia samy manana ny tombony ananany. Ny teknolojia eyelash dia afaka misafidy volomaso mifanaraka amin'ny safidin'ny mpanjifa. Ireo mpankafy prefabricated dia azo ampiasaina amin'ny mpankafy mahazatra ihany koa mba hamoronana fonosana hybrid.
Tanjona: Mety tsara ho an'ny volomaso. Ity volomaso diso ity dia ampiasain'ny mpanakanto volomaso, miaraka amina kojakoja sasany hanitarana volomaso, toy ny tweezers, lakaoly grady ara-pitsaboana, fonosana gel an'ny maso, primera volomaso, hazokely mascara, sns.
Fitaovana: Ity volomaso ity dia vita amin'ny PBT mainty, polybutylene terephthalate, izay mateza toy ny polyester, ary mahazaka ny maripana avo sy ireo solvents samihafa (crème na mpanadio). Tena malefaka sy maivana izy ireo, toy ny volomaso anao ihany. Ho fanampin'izany, fitaovana ara-tontolo iainana izy io.
Teo aloha: Volomaso sandoka andriamby tsy miankina amin'ny masom-bolo andriamby
Manaraka: Ataovy miavaka ny fanitarana volom-boasary kilasika manokana
Fametahana volomaso diso
Mpivarotra fanitarana volomaso
fanitarana volomaso marika manokana
Ataovy miavaka ny marika manokana an'ny tsirairay ...
kapoka mink, Volomaso maso, Fanitarana volomaso, Mpivarotra volomaso, lipgloss, eyeliner,